अनुहार चम्किलो बनाउन मन छ ? अरुपनि छन् काजुका फाइदा - Dainik Online Dainik Online
अनुहार चम्किलो बनाउन मन छ ? अरुपनि छन् काजुका फाइदा
प्रकाशित मिति : २३ असार २०७७, मंगलबार ३ : २५
तपाईले काजु खाने गर्नु भएको होला । यसलाई मसलाको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यसले परिकारलाई समेत मिठो बनाउँछ । तर तपाईले काजू खानुका केही महत्वपूर्ण फाइदा बारे जानकारी पाउनु भएको छ ?
त्यसैले, हरेक दिन काजुको सेवन स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक मानिन्छ ।
काजु खानाले हड्डी तथा दाँतलाई मजबुत राख्नुका साथै मांशपेशीलाइै स्वस्थ बनाउन मद्दत गर्छ । केही काम नगर्दा पनि थकान महसुस हुन्छ अथवा काम गर्ने मुड बन्दैन भने काजु खानाले तपाईंको शरीरमा ऊर्जा थपिनगई फुर्ती आउँछ ।
काजु खानुका केही फाइदाहरु यस्ता छन् :
१) थकान हटाउँछ: काजुलाई ऊर्जाको राम्रो स्रोत पनि मानिन्छ । केही काम नगर्दा पनि थकान महसुस हुन्छ अथवा काम गर्ने मुड बन्दैन भने काजु खानाले तपाईंको शरीरमा ऊर्जा थपिनगई फुर्ती आउँछ ।
२) अनुहार चम्किलो बनाउँछ: काजुमा प्रोटिनको मात्रा उच्च हुन्छ । त्यही भएर काजु खाने गर्नाले अनुहार चम्किलो बन्छ । काजुलाई पानीमा भिजाएर पिस्ने र यसरी बन्ने लेपले अनुहारमा मसाज गर्नाले अनुहार अझ बढी चम्किलो हुन्छ ।
३) दिमागलाई तेजिलो बनाउँछ: काजुमा एक प्रकारको तेल पाइन्छ , जसमा भिटामिन बी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । यसले दिमाग तेजिलो बनाउँछ ।
४) युरिक एसिड बन्न दिदैन्: काजु खानाले शरीरमा युरीक एसिड फर्मेसन हुँदैन । युरिक एसिडको समस्या भएकालाई ड्राइफुड उपयुक्त मानिँदै । तर, त्यस्ता मानिसले पनि निर्धक्कसँग काजु खान सक्छन् ।
५) रक्तचाप नियन्त्रण गर्छ: काजुमा सोडियमको मात्रा कम हुन्छ र पोटासियमको मात्रा बढी हुन्छ । त्यसैले काजु खाने गर्नाले रक्तचाप नियन्त्रण अवस्थामा रहन्छ ।
६) कोलेस्टोरेल घटाउँछ: हरेक बिहान काजु खाने गर्नाले कोलेस्टेरोलको मात्रा नियन्त्रण रहन्छ ।
७) मुटु बलियो बनाउँछ: काजुमा पाइने ओलिक एसिडले मुटुलाई स्वस्थ र बलियो राख्छ । यसका अतिरिक्त काजुमा पाइने विभिन्न तवरले मुटुका मांसपेशीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
८) डायबेटिज नियन्त्रण गर्छ: काजु खानाले शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा बढ्छ र डायबेटिज नियन्त्रण अवस्थामा रहन्छ ।
९) पोषण प्रदान गर्छ: काजुमा कार्बोहाइड्रेड , प्रोटिन , आइरन , जिंक , म्यागनेसियम , कपर , आदि पाइन्छन् । यिनले हड्डी , दाँत आदिलाई बलियो बनाउनका साथै शरीरका सबै प्रणालीलाई तन्दुरुस्त राख्न मद्दत गर्छ ।
१०) प्रोटीनको स्रोत: काजुमा प्रोटीनको मात्रा बढी हुन्छ । त्यसैले काजु खानाले कपाल र छाला स्वास्थ्य र सुन्दर हुन्छ ।
नेपालमा आज थपिए ६७२ कोरोना संक्रमित, ८ को मृत्यु
आज ७७६ कोरोना संक्रमित थपिए, १३ जनाको मृत्यु